Ifulethi elinembono yechibi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMeike
Indawo yethu ephangaleleyo, enefenitshala yanamhlanje ikumgangatho ophezulu wefama yobisi edwelisiweyo ukusuka kwinkulungwane ye-17. Iifestile ezijonge emazantsi kunye nebalcony inika umbono obanzi weLake Gartower. Konwabele ukutshona kwelanga!
Indlu ebanzi kakhulu (malunga ne-130 yeemitha zesikwere ezibandakanya iindawo ezinokuthi zisetyenziswe kwinqanaba elilinganiselweyo ngenxa yophahla oluthambekileyo) kumanqanaba amabini. Kumgangatho ongezantsi kukho malunga nama-40 eemitha zesikwere igumbi lokuhlala elinomabonakude wesathelayithi, isidlali-DVD kunye nenkqubo yeCD stereo (iibhedi ezi-2 zesofa zinokwenzeka njengeebhedi ezongezelelweyo). Ucango lweglasi likuthatha likuse ekhitshini elivulekileyo elisebenza ngokusebenzayo elinesitovu sombane, imicrowave, ifriji enefriji, ikofu kunye nomatshini weespresso kunye neketile. Ecaleni uya kufumana i-25 square metre yokulala (ubuninzi. 4 abantu) kunye negumbi lokuhlambela. Isitebhisi esivulekileyo kwigumbi lokuhlala sikhokelela kwigumbi lokulala lesibini elahlukileyo (malunga ne-20 square metres) kunye negumbi lokuhlambela elidibeneyo. Kuwo omabini amagumbi okulala kukho indawo eyaneleyo yokumisa umntwana kunye / okanye ibhedi. Le ndlu ifanelekele isibini esinye okanye ezibini okanye usapho olunabantwana. Ngenxa yezitepsi ezivulekileyo ngaphakathi kwendlu, ayikhuthazwa kwiintsapho ezinabantwana abancinci okanye abantu abanobunzima bokuhamba. Sikwacebisa ukuba uze ne-non-slippers kunye nawe.
Indawo echasene nendlu yethu yi-Elbholzallee, efikelela kuma-300 eminyaka ubudala e-oki kwaye ikhokelela kubude obuzikhilomitha ezi-2 ukusuka kumadlelo kunye nehlathi le-alluvial ukuya e-Elbe. Ukhenketho lwebhayisekile olubanzi lunokwenzeka ukusuka apha macala onke. Ukuhlamba eGartower Bona (imizuzu emi-2 ukuya elunxwemeni) kusasa okanye ngokuhlwa kuyonwabisa. Ukutyelela indawo yokutyela yaseTrebeler Bauernstuben, eyona ndawo yethu yokutyela esiyithandayo, ixabiseke kakhulu. Ngempelaveki kufuneka wenze ugcino kwangethuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Meike
Sihlala kwindawo eyahlukileyo yendlu kunye nabantwana bethu kwaye sihlala sifumaneka ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna iingcebiso.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gartow